Uyifihla njani iProfayili yakho kwi-LinkedIn? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 416
Ukuba ukhe wazama ukufihla iprofayile yakho ye-LinkedIn kwaye awukaphumeleli, unethamsanqa, kuba apha uya kuyazi uyifihla njani iprofayile yakho kwi-LinkedIn ngendlela elula nekhawulezayo. Ukuqala, uya kuyazi amanyathelo oza kuyilandela ukuyifihla ngokungena kwiwebhusayithi yeqonga kwaye emva koko ungayenza njani usebenzisa usetyenziso lweselfowuni.
Ngendlela efanayo, uya kwazi zeziphi iziphene zokufihla iprofayile yakho, ukuze ngale ndlela uthathe isigqibo sokuba uyakufihla okanye hayi.
Amanyathelo okufihla iprofayile yakho ye-LinkedIn kwiwebhusayithi
Yikholwe okanye hayi fihla iprofayile yakho ye-LinkedIn kwiwebhusayithi Yinkqubo elula, kuba kule meko kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Yiya kuso nasiphi na isikhangeli kwiphepha elisemthethweni le-LinkedIn.
Xa ukwikhasi lasekhaya, cofa kwindawo ethi "Ngena".
Emva koko cinezela "Ngena".
Xa uku-akhawunti yakho khetha ukhetho "Me".
Kuya kuvela iindlela ezininzi kwaye uya kuphawula "Jonga iprofayili".
Xa ukwinkangeleko yesimo khetha "Hlela i-URL kunye neprofayile yoluntu".
Uya kubona iinketho ezininzi kwaye kufuneka uphawule apho ithi "Hlela ukubonakala".
Emva koko yiya kwicandelo elithi "Ukubonakala kweprofayile yakho yoluntu".
Okokugqibela, jonga ukhetho oluthi "lwenziwe lwasebenza" kwaye kunjalo.
Amanyathelo okufihla iprofayile yakho ye-LinkedIn kwi-mobile app
Fihla eyakho Iprofayile ye-LinkedIn isebenzisa usetyenziso lweselfowuni Kulula kwaye kuyakhawuleza njengoko kuchaziwe kwinqaku elidlulileyo kwaye unokujonga nje ukulandela la manyathelo:
Vula usetyenziso lwe-LinkedIn kwisixhobo sakho.
Emva koko bhala igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kwaye ucinezele u- "Enter".
Nje ukuba ungene kwiakhawunti yakho, cofa ifoto yakho yeprofayile.
Kuya kuvela iindlela ezininzi kwaye uza kukhetha leyo ithi "Uhlengahlengiso".
Emva koko jonga "Ukubonakala."
Emva koko cofa ku "Hlela iprofayile yakho yoluntu".
Uya kwicandelo elithi "Hlela ukubonakala".
Okokugqibela, tshintsha ukubonakala kweprofayili yakho kwaye uyihambise kwi- "Off" kwaye yiyo lonto.
Kwimeko apho ufuna ukuba amanye amacandelo embonakalo yakho abonakale kuluntu, kuya kufuneka kuphela hover ngaphezulu kwayo kwaye ucofe ku "Show".
Ukungancedi kokufihla iprofayile yakho ye-LinkedIn
Beka eyakho Iprofayile efihliweyo kwi-LinkedIn iya kukuzisela iziphene Kubalulekile ukuba kulungile ukuba uvavanye ngaphambi kokwenza le nkqubo. Ngenxa yeso sizathu, siya kubakhankanya apha ngezantsi:
Awuyi kuba nakho ukwazi ukuba ngubani obone iprofayile yakho, kuba olo khetho lukhubazekile, ukuba inkampani inomdla kuwe, ayizukukwazi ukwazi kwakhona.
Iinkampani azizukubona iprofayile yakho Kwaye oko kuyinto engeloncedo ingakumbi ukuba ufuna umsebenzi.
Imbali yakho yokubukela izakucinywa.
Ukujonga ezi ngxaki zintathu, Kuya kufuneka ucinge kakuhle ukuba uyafuna ngokwenene ukufihla iprofayile yakho ukusuka kwi-LinkedIn.
1 Amanyathelo okufihla iprofayile yakho ye-LinkedIn kwiwebhusayithi
2 Amanyathelo okufihla iprofayile yakho ye-LinkedIn kwi-mobile app
3 Ukungancedi kokufihla iprofayile yakho ye-LinkedIn
Ungabafihla njani abafowunelwa kwiakhawunti yakho ye-LinkedIn?